आडम्बर र घमण्डबाट टाढा बसेका डायमन शमशेर राणा | literature आडम्बर र घमण्डबाट टाढा बसेका डायमन शमशेर राणा | literature
We have 1323 guests and 219 members online
Content View Hits : 35808631
Tuesday, 08 March 2011 19:49
Exclusive: काठमाडौं- डायमनशमशेर राणा १९७५ साल असार २१ गते पाल्पा तानसेनको ठुटेपीपलमा जन्मेका थिए । कर्णेल बुद्धशमशेर र मोहनकुमारीका तीन छोरामध्ये उनी कान्छा थिए । उनी बाल्यकालदेखि नै निडर, निष्पक्ष र निर्भीक थिए ।
राणाको विबाह ढालविक्रम शाहकी छोरी बालिकासँग २००१ सालमा भएको थियो । यी दम्पतीबाट एउटी छोरी गीता र दुई जना छोरा खुस्वु अनि रघु जन्मेका थिए ।
राजा त्रिभुवन २००७ सालमा भारतमा जाँदा नेपाली जनता राजालाई फर्काउने अभियानमा सक्रिय थिए । त्यसै सिलसिलामा देशभित्र क्रान्तिको शङखघन्ट बजिरहेको थियो । काठमाडौं शहरमा पनि नाराजुलुसले राणा शासकका कान घोच्न थालेको थियो । त्यही क्रममा डायमन शमशेरलाई प्रजातन्त्रवादीहरुलाई दबाउने जिम्मा दिएर राणा सरकारले इन्द्रचोकतिर खटाएको थियो । त्यस बेला उनी सेनाका कप्तान थिए ।
राणा मानव स्वतन्त्रताका पक्षपाती थिए । यस प्रयोजनलाई र्सार्थक पार्न उनी नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश भए । किनभने उनी जनताको हीत र राष्ट्रको विकास चाहन्थे । त्यही अनुरूप उनी लेख्तै र भाषण गर्दै अघि सरे । यही क्रममा उनी नेपाली काङ्ग्रेसको ललितपुर जिल्लाका सभापति पनि बने । उनी त्यस पदमा एक पटक होइन, दुई पटक होइन, तीन पटकसम्म बहाली भए ।
राणा २००७ अघि र २०१७ सालपछि बराबर जेलखाना गइरहे । यही क्रममा उनी धेरै वर्ष जेलमा बसे । तर जति नै जेलमा परे तापनि उनले कहिले आफ्नो शिर भाँचेनन्, शासकसँग माफ मागेनन् र कानुनसमक्ष आत्मर्समर्पण पनि गरेनन् । उनी साँच्चैका सेतो बाघका लेखकै थिए । त्यसैले बाघ मान्छे भएर नै जेलभित्रबाट पनि उनी गर्जिरहे, "पञ्चायती व्यवस्था मुर्दाबाद ! प्रजातन्त्र जिन्दावाद !"
पढेरभन्दा उनले परेर धेरै जाने । नेपाली सेनाका तर्फबाट दोस्रो विश्वयुद्धमा हिन्दूस्थान पुगेर उनले आफ्नो वीरता देखाए । राणाले जागीर खोसेपछि उनी केही समय ढाक्रे भए । फेरि पछि प्रजातन्त्रले उनलाई जागीर थमौति गरिदियो । तर केही वर्ष पुनः कप्तान भएर उनले राजिनामा दिए । त्यति बेला उनले भनेका थिए ''म राजनीतिबाट मुलुकको काँचुली फेर्ने काममा लाग्छु ।''
राणा उत्साहका लखपति थिए । उनी जनसर्म्पर्क र शिष्टाचारका धनी थिए । जुनसुकै सिद्धान्तका मान्छेलाई पनि उनी आत्मीयता दिन्थे । राणा शासन ढलेपछि उनी सिद्धान्तका सुन भए । नेपाली काङ्ग्रेस उनकालागि प्राण भयो । उनी लेख्ता र वोल्दा नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र जयजयकार गर्थे । तर २०४६ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला या उनका मतियारदेखि उनी घरिघरि अपमानित भएको बेहोरा बक्त्याउँथे । त्यस बेला उनी कोइरालालाई उभ्याएर बराबर भन्थे, "यो काङ्ग्रेस टिकेछ भने म कान काट्छु ।"
राणाले राणा शासनको जेलभित्र पसेकै दिन एउटा लेख लेखे । उक्त लेख उनको मनमा रचिएको थियो । सो बेहोरा उनले बालकृष्ण समलाई भने, "बाल दाइ ! मैले फेरि लेख्ने विचार गरेँ ।" अनि सम बोलेका थिए, "जनतालाई मुक्ति दिने र शिक्षा दिने कुरा लेख्न पर्छ, लेख ।" अनि डायमन शमशेरले त्यसै गरे । लेख्ता लेख्तै उनले सातवटा उपन्यास लेखे, वसन्ती, सेतो बाघ, प्रतिबद्ध, सत्प्रयास, अनीता, गृहप्रवेश र धनको धब्बा । यी उपन्यास लेखनका सिद्धहस्त नायक बने । यिनको उपन्यासमा आधारित चलचित्र पनि बन्यो । उनका केही उपन्यास हिन्दी, अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, र जापानी भाषामा अनुवाद पनि भए । नेपाली भाषासाहित्यमा लेखकस्वबाट आफ्नो जीवनकालमा नै धेरै आम्दानी प्राप्त गर्ने प्रथम नेपालीमा उनको पनि नाउँ दरियो ।
राणालाई एकपटक नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानको सदस्य हुने इच्छा थियो । उनी भन्थे, "एक दिन भए पनि त्यहाँको कुसीमा बस्न पाए हुन्थ्यो । धेरै पर्खें मैले मदन पुरस्कार पनि पाइँन । अनि एक दिन कमल दीक्षितलाई मैले मुखै फोरेँ, 'मैले मदन पुरस्कार त पाइनँ पाइनँ जगदम्बाश्री त दिनुहोस् न !'' मेरो वचन सुनेर दीक्षितले भनेका थिए, ''यस वर्ष त मैल जनकविकेशरी धर्मराज थापालाई वचन दिइसकेको छु, अर्को वर्ष म यहाँलाई जगदम्बाश्री टक्रयाउने छु ।'' अनि मैले अर्को वर्ष जगदम्बाश्री पाएँ ।"
राणा सरलभन्दा सरल थिए । उनी मनमा लागेको कुरा खुलस्तै भनिदिन्थे । कुनै पनि कुरा गर्न उनकालागि औपचारिक बहाना चाहिंदैनथ्यो । त्यसैले उनी प्रायः एक्लो पनि पर्दै गए । जीवनको उत्तर्रार्धमा उनले त्यतिसारो आँखा पनि देखेनन् । त्यसमाथि उनलाई मधुमेहले च्यापेको थियो । उनले कहिले घुँडा दुख्ने विमार खेपे, कहिले उनको अनुहार सुनिने गथ्र्यो र उच्च रक्तचापले पनि उनलाई आछुआछु बनाउने गथ्र्यो । उनी जसलाई भेटेपनि नेपाल र नेपालीले आफूलाई नचिनेको गुनासो गर्थे ।
राणा दुई वर्ष अघिदेखि निक्कै बिरामी पर्दै आएका थिए । त्यस बेला नै पनि उनी मुटुका कारण नर्भीक अस्पतालमा भर्ना भएका थिए र उनलाई एन्जिओप्लाष्ट गरिएको थियो । तर क्रमशः क्रमशः उनका दुवै मृगौला निस्कृय भइसकेका थिए । अन्ततः उनी २०६७ फागुन २० गते स्वर्गीय भए ।
-Narendraraj Praai in Kathmandu